ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အလုပ်အကိုင်များ - ဂျော့ဘ်စိုက်ပျိုးရေး | USAHello | USAHello
တခြားစိုက်ပျိုးရေးအသက်မွေးဝမ်းပညာရေးနှငျ့အခြို့လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်နိုင်ပါသည်. ထိုကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးစစ်ဆေးရေးအဖြစ်အစိုးရအလုပ်အကိုင်များကိုတောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား Get
စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လယ်ယာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးနှင့်အတူဒေသများရှိရပ်ရွာကောလိပ်များ. နှစ်နှစ်တွဲဖက်ဒီဂရီကမ်းလှမ်းဘယ်ဟာ. သင်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်သိပ္ပံတွဲဖက်ဒီဂရီ, စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံသို့မဟုတ်ဇီဝဗေဒရနိုင်. စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအလုပ်မလုပ်, သို့မဟုတ်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ချင်လျှင်, အသင်တို့သည်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်. အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များအများအပြားစီးပွားဖြစ်သင်တန်းများရှိပါသည်.
အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့. အကွံဉာဏျပေးနှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကအလုပ်၏ CVs နှင့်ပုံစံများကိုကူညီပေးနေကြပါသည်. လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်မလုပ်နှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားယူနိုင်ပါသည်.
သငျသညျကနေအနီးဆုံးအလုပ်အကိုင် Center ကရှာဖွေပါ